Nandray Am-pifaliana ny Mpanjaka Saodiana ny Indoneziana Saingy Mampanahy ny Mpikatroka ny Herim-Panintonan’i Riyadh · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Marsa 2017 5:03 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, bahasa Indonesia, Español, English
Taorian'ny fiatoana 47 taona, nitsidika an'i Indonezia indray ny mpanjaka Saodiana. Nankasitrahan'ny maro tao Indonezia, izay firenena maro an'isa Miozolomana indrindra manerantany ny fitsidihana, saingy naneho ny fahatezerany ny sasany noho ny fanjakana tsy niresaka momba ny manjò ireo Indoneziana mpifindra-monina miaritra fanitsakitsahana ao Arabia Saodita.
Tonga tao Indonezia tamin'ny 1 Marsa ny mpanjaka Salman ben Abdulaziz Al Saud izay tafiditra ao anatin'ny fitetezan-tany ataony maharitra iray volana ao Azia, anisan'izany i Malezia, Brunéi Darussalam, Shina, Japana ary Maldives. Miaraka amin'ireo delegasiona miisa 1.500 ny mpanjaka, ahitana printsy 25 sy minisitra 10.
Nandritra ny kabariny teo anoloan'ny loholona sy mpanao lalàna Indoneziana, nandrisika fiarahamiasa akaiky kokoa mba hiadiana amin'ny fampihorohoroana sy ny mahery fihetsika ny Mpanjaka Salman .
Nanatontosa fivoriana miaraka amin'ireo mpitarika ara-pivavahana ao Indonezia ihany koa ny mpanjaka sy ny manodidina azy.